Tontolo_iainana · Febroary, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Febroary, 2018
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Febroary, 2018
Zaza 10 Taona ao Florida Nitory ny Governemanta Amerikana noho ny Haratsin'ny Politika Ara-toetr'andro
"Mieritreritra aho fa voinam-pirenena ny fiovan'ny toetr'andro ka mahavoa ny olon-drehetra"
Eoropa Andrefana 28 Febroary 2018
Amerika Latina 27 Febroary 2018
Azia Atsimo 20 Febroary 2018
Tamin'ireo loza voajanahary roa tena vao haingana tsaroana: ny rivodoza tao Myanmar sy ny horohorontany tany Sichuan, Shina, niverina tao anaty adihevitra ny olana mikasika ny famatsiana rano madio sy ny rano fisotro ho an'ireo vahoaka mila izany. Eo ambany, ireo lahatsary marobe izay manolotra vahaolana samihafa mba hahazoana rano madio na fara-faharatsiny fomba mora ho an'ireo olona hisotroana rano mahasalama.
Tontolo Iainana: Tafatafa Iray Miaraka Amin'i Isabel Hilton Mikasika Ny ChinaDialogue
Azia Atsinanana 18 Febroary 2018
Nanao fanavaozana ara-indostrialy tao anaty fotoan-tsarotra i Shina.. nanaraka ny sori-dalana Tandrefana io, avy eo nihazakazaka haingana nankamin'ireo fetra faran'izay maodely izay. Raha mihetsika araka ny tokony ho izy ny governemanta Shinoa, manana fahafahana ho lasa lohany eo amin'ny lafiny fitahirizana sy fanadiovana i Shina. Raha tsy izay kosa, ohatran'ny ho ratsy ny fandehan-javatra.
Fanodinana Indray Ireo Karatra Eletrônika sy Resaka Zaza 11 Taona Mpiaro Tontolo iainana
Azia Atsinanana 14 Febroary 2018
Ny olona tsirairay, ny vondrom-bahoaka nitsinjarana fahefana, dia samy harisika eo amin'ny sehatra tsirairay misy azy avy mba hanadihady ny fahapoizinana, hanao fikarohana, handrafitra vahaolana, ary hanao tsindry amin'ireo manampahefana sy mpandraharaha eny an-toerana.
R.D. Kongo 06 Febroary 2018
Okraina: Fialofan'ny Biby
Eoropa Afovoany & Atsinanana 03 Febroary 2018
Ny 19 Aogositra 2007, nandeha nitsidika toerana iray fialofan'ny biby ny mpanao gazety Okraniana Tanya Kremen, tanàna kely iray miorina ao ivelan'ny Hostomel Toy izao ireo heviny sy ireo eritreriny, izay nalefany tamin'ny blaoginy tao amin'ny Korrespondent.ne